F: Nahoana ianao no mivarotra lafo kokoa noho ny hafa?
A: Ny fitaovana fandrefesana rehetra an'ny DASQUA dia vita amin'ny fitaovana avo lenta ary mandeha amin'ny alàlan'ny fizotry ny milina mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra, mifamatotra amin'ny Calibration Certificate sy Warranty Roa Taona mba hahatonga anao tsy hanana ahiahy any aoriana, miaraka amin'ny fitantanana trano fitehirizana sy lozisialy mahomby mba hahazoana antoka fa ora nanomezana. Mendrika ny vidiny sy ny fahatokisanao izany!
A: Hatramin'ny 1980, DASQUA dia nanamboatra ny vokatra marika manokana manaraka ny fenitra sy rafitra tsara tantana indrindra sy maharitra 40 taona mahery.
F: Manana mari-pankasitrahana ve ianao?
A: Eny, ny fitaovan'ny fandrefesana DASQUA rehetra dia ankatoavin'ny Labs manana ny talenta CNAS any ivelany.
A: Ho an'ny vokatra RTS dia matetika no manana famatsiana ampy amin'ny tahiry. Ho an'ny hafa, ny fotoana itarihana dia miankina amin'ny habetsahan'ny kaomandy, isa maodely, sns… Pls jereo miaraka amin'ny mpivarotra anay alohan'ny hanafarana azy.
F: Ahoana no ahafahanao miantoka ny kalitaony?
A: Izahay dia mizaha ny santionan'ny prototype alohan'ny fivoarana, manao ny fitsapan'ny mpampiasa izahay, fitsapana tsy ara-dalàna, fitsapana maharitra mandritra ny famokarana betsaka, apetraka ny maso manokana mba hialana amin'ny gorodona kely na dia amin'ny faritra tsy refesina aza. manara-maso tanteraka ny vokatra vita rehetra izahay alohan'ny fandefasana.
F: Ahoana no ahafahanay ho mpandraharaha eto amin'ny firenenanay?
A: Amin'ny maha mpanamboatra lohalaharana amin'ny sehatry ny fandrefesana fitaovana, DASQUA dia mifantoka amin'ny fiaraha-miasa maharitra amin'ireo mpizara / agents manerantany amin'ny fotoana rehetra. Raha te hivarotra ny vokatra DASQUA eo amin'ny tsenanao ianao, azafady mifandraisa aminay amin'ireto mpivarotra anay ary ampahafantaro anay ny fampahalalana momba ny orinasanao, dia handinika ny fahaizanao izahay ary hanome anao valiny haingana.
Ahoana ny fomba hahatongavanao ho mpizara / Agent an'i DASQUA?